Galmudug oo mar kale u istaagtay la dagaallanka Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo mar kale u istaagtay la dagaallanka Al-Shabaab
Wuxuu u mahadceliyay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani oo xilli loo baahnaa garab istaagtay Galmudug, waxa uuna xusay in Galmudug iyo Puntland iska kaashan doonan la dagaalanka Al-shabaab.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Dardargelinta sugidda nabad-gelyada iyo xoreynta degaannada weli ku jira gacanta Al-shabaab ayaa looga hadlay shirka golaha amniga oo uu shir guddoomiyay madaxweyne Ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid.
Kulanka ayaa looga diirrada lagu saaray Sugidda amniga Dhuusamareeb iyo degaannada ku xeeran, iyo howlgallo rogaal celin ah oo lagu qaado kooxda Al-shabaab oo dib ula wareegtay deegaanno katirsan Galmudug oo ay faarujiyeen daraawiishta Galmudug iyo kuwa Dowladda Federalka Soomaaliya.
“Maalmahan so socda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo daraawiishta Galmudug waxay qaadi doonaan howlgallo ay uga si faynayaan deegaannada Galmudug kooxda Al-shabaab “ayuu yiri Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Ali Ciid.
Howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadeen deegaanno hoostaga gobolka Mudug oo ay kala wareegeen Al-shabaab sida Bacaadweyn iyo Cammaara ayay ciidamada huwanta ahi baneeyeen, taas oo Al-shabaab u suuragelisay in ay si nabad geliyo ah ugu soo laabtaan.